Isikhwama esibucayi: imithetho yokunakekelwa
Izinwele ezinempilo, ezinhle nezindebe zingumcebo wemvelo futhi ngesikhathi esifanayo ukuhlobisa okuyinhloko kobulili obuhle. Kodwa ingabe sasicabanga ukuthi izinwele ezinhle zixhomeke ngqo esimweni esinempilo se-scalp? Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kubantu abanesikhumba esibucayi kakhulu.
Ngokuvamile, sizama konke okusemandleni ethu ukunakekela isakhiwo sangaphandle sezinwele kuzo zonke izindlela futhi sikhohlwe ngokuphelele lokho okubizwayo, ukuvuthwa empande. I-Imenov, i-scalp yezinwele iyazalwa, lapho ithola khona konke okudingekayo futhi okunomsoco, futhi kuncike esimweni sayo, ukuthi izinwele zizobukeka kanjani.
Ngakho-ke kulandela ukuthi isiqhwaga ngumthombo oyinhloko wezempilo nobuhle bezinwele zethu. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi isikhumba sekhanda sidinga ukunakwa okufanayo njengoba ubuso nomzimba.
Ngokwezibalo, cishe abangu-80% abameleli be-low-lobe babhekene nenkinga enjengokuthi i-hypersensitivity yesikhumba, kunesidingo sokunakekelwa okunomthelela. Isikhumba esinjalo sithinteka kakhulu emiphumeleni yanoma iziphi izici ezicasulayo - kokubili zangaphandle nangaphakathi.
Izinguquko ekushiseni, umoya, izimo ezimbi zemvelo, umoya omile ovela emoyeni - konke lokhu kungabangela ukungcola, ukungakhululeki nesimo sesikhumba esimpofu. Ngakho-ke, siyaqaphela ukuthi ukulahlekelwa umswakama okuholela ekuqaliseni izinhlayiya ze-epidermis futhi, ngenxa yalokho, kunomzwelo wokuma, ukucasuka nokucubungula. Futhi isikhumba sesikhumba asiyona into ehlukile.
Ukunakekela kahle isikhumba esibucayi sekhanda
Lapha, ngokuqinisekile, umbuzo uvela ngokuqondene nokuthi ungavikela kanjani isikhumba esikhwameni ezivela ngaphandle? Kusukela isikhumba esibucayi sekhanda sidinga imithetho ekhethekile neyinkimbinkimbi yokunakekelwa nokuphuthumisa. Zonke izindlela zokunakekelwa kwezinwele, njengomthetho, kufanele zithande futhi zingabangeli ukucasula esikhumbeni.
Ngcono kakhulu, uma ukubunjwa kwe-shampoo kuhlanganisa izihlungi ze-ultraviolet, njenge-glycerol, i-zinc, i-polynucleic acids, ama-vegetable oil kanye nama-moisturizing components, okuvimbela ngokuphumelelayo ukulahlekelwa umswakama.
Ngendlela, kunendlela ekhethekile yokuhlanza izinwele ngesikhumba esibucayi, okungukuthi: izinga lokushisa kwamanzi lokugeza ikhanda kumele libe yindawo; ukuze kusetshenziswe i-shampoo, kufanele kube ne-foamed ezintendeni; I-detergent kufanele isetshenziswe izinwele izikhathi ezimbili - usawoti wokuqala wokuhlanza uhlanza futhi udoti luhlanjululwe, futhi ngomzuzwana wesibili, izingxube ezinomsoco nezivikelayo ziqala ukusebenza.
Ukuze uvikele isikhumba sethu ngaphakathi, faka kokudla okunye okuqukethe amavithamini A, B no-C.
I-aloe vera, isithako semvelo esaziwa kakhulu emhlabeni jikelele we-cosmetology kanye nekhemisi enezimo zayo eziyisimangaliso nemiphumela yokuphulukisa esikhumbeni. Izinhlayiya nge-aloe zikhipha ngokucophelela ukunakekela isikhumba esibucayi, ukuvimbela ukulahlekelwa komswakama nokuvikela ama-bacterium.
Siphindela ibhalansi ku-scalp ebucayi
Ukubuyisela ibhalansi ye-scalp ebucayi kungasebenzisa ama-agent wokubuyisela asekelwe kumafutha. Sibeka i-drop drop of vegetable oils yemifino ephezulu kakhulu (i-argan, jojoba noma i-almond) Ngizomnakekela ngosizo lokuhambisa umzimba. Shiya amafutha kuze kube sekuseni, futhi usuvele usenekuseni ekuseni nge-shampoo namanzi afudumele. Ngendlela, ukususa amafutha kusuka kwezinwele kudingekile kuhlelo oluthile: sigqoka i-shampoo ngezinwele ezomile, bese sihambisa futhi siphuphuma, bese sigeza.
Uma kwenzeka ukucasula esikhwameni, kunconywa ukuba unciphise umuthi 1: 1 ngamanzi ngenkathi ugeza.
Zama njalo ukugeza imoto ngokugcwele izinwele, ngaphandle kwalokho izinsalela zayo zingabangela ukucasuka. Ngemuva kokusebenzisa i-shampoo, uma amanzi enesibindi esiphezulu noma esiphezulu, ungakhohlwa ukusebenzisa i-asidi yehlisela ukuthi ususe ngokuphumelelayo i-residu yasawoti. Lokhu kuhlanza usizo kungalungiselelwa kalula ekhaya. Thatha isipuni esisodwa sejamu kalamula noma i-apula cider uviniga bese uhlanganise ne 1 litre lamanzi.
Ukuphunga okuhlosile kwekhanda nokusetshenziswa kwamanzi aphansi-fat kusho ukuthobisa ngokuphelele futhi kususe ukucasuka. Kudingekile ukugwema amathuluzi okugaya, afaka amafutha abalulekile, ngoba zingabangela ukucasuka.
Uma uzizwa usch eqinile futhi umuzwa wokuqina, kufanele ume isikhathi esithile kuwo wonke amadivaysi okushisa okushisayo (ama-ironing, abakhanda izinwele, ama-curlers, ama-curlers). Ukushisa okuvela kulezi zinkampani, kakhulu kuyomisa ikhanda lakho.
Ukusetshenziswa kwamabhulashi ngezinwele ngensimbi noma amapulasitiki epulasitiki kulimaza kakhulu isikhumba esibucayi. Ngakho-ke, kufanele ulandele ibhulashi elithambile ngezinhlanga ezinzima zemvelo - lokhu ngeke kuthinte nje kuphela isikhumba sakho, kodwa nezinwele zakho.
Ukwelashwa kwezinkinga nge-scalp ebucayi ekhaya
Uma unemizwa engajabulisayo nomile wesikhumba sekhanda, kufanele usebenzise amasonto akhethekile izikhathi ezingu-2-3 ngesonto. Futhi uma le nkinga ingavuki, lezi maski ziphelele isicelo esisodwa sokunqabela.
Mask of ubisi omuncu nge-scalp ebucayi
Njengomthetho, imikhiqizo yobisi omuncu iyanciphisa isikhumba. Ngakho-ke, isisindo sobisi obomvu asizange sibe yinto ehlukile. Ukuze silungiselele, sikhetha ubisi oluphephile futhi siwushise ama-degrees angu-37, bese kubalwa ngobuningi bezinwele. Simboza ikhanda ngephepha lesikhumba, futhi phezulu usule ithawula elikhulu, ukuze ulondoloze ukushisa. Sigcina imaski imizuzu engu-30. Ngemuva kwalokho susa ithawula, bese usebenzisa iphepha ku-scalp kanye nezinwele ezinobisi obomvu. Massa ngosizo lweminwe yekhanda emizuzwini engu-3-5 bese ugeza ubisi oluhlelekile.
Amaski alandelayo, alungiselelwe ngokuzimela, anconywa ukuba asetshenziswe njalo ngosuku.
Sithatha i-burdock, amafutha omnqumo kanye ne-egg yolk. Konke lokhu kuxubile kahle futhi kusetshenziswe esikhumbeni sekhanda nezinwele. Amafutha omnqumo iyisiluleko esihle kakhulu sokuphulukisa, ukuphucula nokuvuselela isikhumba. Faka isicelo se-mask kufanele ifudumale kancane, bese udinga ukumboza ikhanda ithawula, okuzosiza i-mask ukuba ibambe kahle futhi iqinise umphumela wayo.
Sithatha amafutha omnqumo nama-burdock 1: 1 bese uwaxhuma, bese ululaza uphinde ubeke ingxube ekhanda nasezinwele. Ngosizo ithawula simboza ikhanda lethu futhi sishiye ihora elilodwa. Ngemva kwesikhathi sesiphelile, siwahlamba mascot nge-shampoo namanzi afudumele.
Isisindo esiqabulayo se-scalp ebucayi
Thatha izipuni ezingu-4 zamaqabunga e-birch uphinde uthele ama-milliliters angu-300 amanzi abilayo, sibeka ukuze sichithe amahora amabili. Bese uhlunga futhi emva kokugeza konke ukuhlunga esikrinini.
Sithatha uju namafutha omnqumo 2: 1, sihlanganise futhi siwushise kancane. Ngehora sifaka isikhumba sesifuba, sigqoke ithawula, bese siwageza.
Futhi okokugcina, khumbula ukuthi isikhumba esibucayi akuyona nje isifo esiyingozi, kuyisifo esikhethekile, ukwelashwa okumele kuphathwe umculi we-trichologist - udokotela obhekene nazo zonke izinkinga ezihambisana ne-scalp!
Kuthiwani uma izinwele zifakelwa amandla?
Ubuhle nempilo yezinwele
Ungasusa kanjani upende kusuka ku-jeans
Izilwane ezingavamile ekhaya: ingabe kuyingozi?
Umehluko eminyakeni yobudala phakathi kwezingane kusuka eminyakeni emihlanu kuya kweyisikhombisa, kusukela ku-8 kuya phezulu
Amathiphu okuthatha ukuhlolwa kobisi lwebele
Ukukhula umngcwaba ekhaya
Ungamuncenga kanjani ingane yakho ukuba uncelise iminwe yakho?